Lacag hel si aad u hesho CDL -gaaga: Sida ay u shaqayso | Tababbarka CDL
Bogga ugu weyn Lacag La Si Si Aad U Hesho CDL -kaaga: Sida Uu U Shaqeeyo | Tababarka CDL
sawir ka yimid canva.com
Iyada oo leh cinwaanka, 'Lacag Bixi Si Aad U Hesho CDL -kaaga', waxaan hubaa inaad la yaabi doonto oo aad u xiisayn doonto inaad ogaato sida ay u shaqayso, sax?
Diiwaangelinta barnaamijka tababarka darawalnimada micnaheedu waa inaad wax ka baran doonto oo aad la shaqayn doonto qaar ka mid ah darawalada ugu fiican adduunka isla mar ahaantaana aad lacag qaadan doonto.
Maqaalkan, waxaan ku sharxi doonnaa waxa uu yahay shatiga CDL, foomamka kala duwan, sida ay u shaqeyso, iyo sida lacag laguugu siiyo si aad u hesho CDL -gaaga. Aynu si fiican u quusinno!!!
Waa maxay liisanka CDL?
Liisanka darawalnimada ganacsiga (CDL) waa liisanka darawalnimada oo kaa doonaya inaad ka shaqayso baabuurta ganacsiga. Helitaanka CDL waxay caddaynaysaa inaad leedahay khibrad iyo khibrad aad ku maamusho baabuur khaas ah.
Ruqsadaha CDL waxay u qaybsan yihiin saddex nooc: Fasalka A, Fasalka B, iyo Fasalka C.
Si aad u hesho mid ka mid ah liisamadan, waa inaad marka hore buuxisaa ruqsadda, imtixaanka, iyo shuruudaha da'da. Gobollo badan, waa inaad jirtaa 18 sano si aad u hesho Darajada B ama Darajada C CDL laakiin 21 sano jir si aad u hesho Darajada A CDL. Shuruudaha helitaanka CDL ayaa sidoo kale ku kala duwanaan doona gobolka.
Waa inaad haysataa ruqsadda saxda ah si aad u wado nooc gaar ah oo baabuur. Waa kuwan soo koobid waxa ay yihiin:
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Noqdo Darawal Racecar Lacag La'aan 2021
Sida Loo Helo Liisanka Darawalnimada Ganacsiga
Shuruudaha qaarkood waa in la buuxiyaa si loo helo CDL. Maadaama gobol kastaa leeyahay shuruudo kala duwan, waxaa muhiim ah inaad la tashato gobolkaaga marka aad go'aansanayso sida loo helo liisan. Kuwa soo socda ayaa ah tillaabooyinka aasaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad qaaddo si aad u hesho CDL:
Go'aanso nooca liisanka aad u baahan tahay.
Baadh faahfaahinta CDL.
Qaado laysankaaga darawalnimada ganacsiga.
Haddii loo baahdo, qaado imtixaanka oggolaanshaha CDL.
Qaado imtixaanka aqoonta CDL.
Waa Maxay Tallaabooyinka Loo Baahan Yahay Si Loo Helo CDL?
Dhammaan fasallada liisanka A, B, iyo C waxay leeyihiin shuruudo aasaasi ah oo isku mid ah: hase yeeshe, si loo helo CDL, waxaa jira tallaabooyin gaar ah, haddii kale loo yaqaan shuruudo la qaado. Waxay kala yihiin:
Noqo ugu yaraan 21 sano jir (ugu yaraan 18 sano jir si aad u kaxayso intrastate)
Soo gudbi Codsiga CDL ee gobolkaaga oo bixi khidmadda ku habboon
Bixi xaqiijinta lambarka aqoonsiga iyo Lambarka Bulshada (hubi shuruudaha gobolkaaga)
Bixi caddaynta degenaanshaha gobolka iyo Maraykanka
Soo gudbi Foomka Warbixinta Baaritaanka Caafimaadka oo dhammaystiran iyo Foomka Shahaadada Baadhaha Caafimaadka
Gudub imtixaanka aragga iyo imtixaanka aqoonta
Ka dib markaad gudubto, lagu siiyo Ogolaanshaha Barta Ganacsiga (CLP)
Sug ugu yaraan 14 maalmood ka hor intaadan jadwal u samayn imtixaanka xirfadaha waddada ee CDL
Gudub kormeerka safarka kahor
Gudub xirfadaha waddada iyo imtixaanka wadista (waa inaad soo qaadataa gaadhigaaga)
Ka dib markaad gudubto, bixi khidmadaha lagama maarmaanka u ah CDL-gaaga cusub (Ikhtiyaar ahaan, soo gudbi Hubinta Diiwaanka 10-Sano, haddii aad liisanka darawalnimo ku lahayd gobol ama xukun kasta oo aan ahayn kan aad ka codsanayso CDL-gaaga)
Intee in le'eg ayay ku kacaysaa helitaanka CDL?
Sida laga soo xigtay cdl.com, qiimaha lagu helo liisankaaga darawalnimo ee ganacsi (CDL) wuu kala duwan yahay iyadoo ku xiran gobolka. Si kastaba ha noqotee, celcelis ahaan, waxaad filan kartaa inaad bixiso inta u dhaxaysa $ 1,000 iyo $ 8,000 koorsada tababarka darawalnimada xamuulka oo kuu diyaarin doonta inaad ka gudubto imtixaankaaga CDL. Intaa waxaa dheer, qiimuhu wuu kala duwanaan doonaa iyadoo ku xiran nooca shatiga iyo oggolaanshaha aad rabto iyo sidoo kale dugsiga aad dhigato.
Akhri ALSO: 15 Barnaamijyada Iibsiga Baabuurka ugu Fiican 2021 | Barnaamijyada Raadiyaha Baabuurka ee ugu Fiican
Mudo intee leeg ayay qaadataa in la helo Ruqsadda Darawalnimada Ganacsiga?
Waqtiga ay qaadan doonto si aad u hesho Shuruudaha CDL wuxuu ku tiirsan yahay oo kaliya iskuulka aad dooratay inaad dhigato iyo sidoo kale nooca shatiga darawalnimada ganacsi ee aad rabto inaad hesho.
Barnaamijyada badankoodu waxay qaataan qiyaastii saddex ilaa toddoba toddobaad si ay u dhammaystiraan, barnaamijyada Class A waxay qaataan waqti ka dheer barnaamijyada Fasalka B iyo C maxaa yeelay waxay bixiyaan tababar darawalnimo oo qoto dheer oo qoto dheer. Barnaamijyada Fasalka A waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad kaxaysato xamuul iyo gaadiid kala duwan oo ka badan liisanka Darajada B iyo C.
Sidoo kale, iskuul walba wax yar ayuu ku kala duwan yahay inta ay le'eg yihiin barnaamijyada tababarka darawalnimada xamuulka. Sidaa darteed, la xiriir wadista dugsiyada gobolkaaga si aad wax badan uga ogaato barnaamijyadooda kahor intaadan isqorin. Xusuusnow, sababta oo ah hal barnaamij oo gaaban ma tilmaamayso kororka tayada waxbarashada. Waxay noqon doontaa dantaada haddii aad samayso xoogaa baadhitaan ah oo aad hubiso inaad maalgelinayso dugsiga kuugu fiican.
Akhri ALSO: Sida Looga Iibsado TESLA Kanada | 2021 Hagaha Buuxa ee Hantida
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Darajada A, B, iyo Liisanka Darawalnimada C?
Sidii hore loo sheegay, wax kale oo la tixgeliyo marka aad raacayso tababarka darawalkaaga xamuulka iyo shuruudaha CDL waa nooca CDL ee aad u baahan tahay. Waxaa jira saddex fasal oo shati CDL ah: Fasalka A, B, ama C.
Xulashadaada nooca liisanka CDL waa in ay inta badan ku xirnaataa shuruudaha shaqadaada, iyo sidoo kale waxa mustaqbalka aad hiigsanayso. Halkan waxaa ah farqiga ugu weyn ee u dhexeeya nooc kasta oo CDL ah:
Fasalka A: Ikhtiyaarkan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kaxayso baabuurta sida cagaf-cagafyada, sidayaasha xoolaha, booyadaha, sariirta sariirta, iyo kuwo kaloo badan.
Fasalka B: Ikhtiyaarkan waxaa loogu talagalay kuwa doonaya in ay ka shaqeeyaan basaska magaalada, basaska dugsiga, baabuurta wax lagu keeno, baabuurta qashin -qubka, baabuurta tooska ah, iyo kuwo kaloo badan.
Fasalka C: Ikhtiyaarkan ayaa kuu oggolaanaya inaad kaxayso baabuurta yaryar sida kuwa rakaabka qaada, baabuurta yaryar, baabuurta HAZMAT, iwm.
CDL Heerka A CDL wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kaxayso baabuur ganacsi oo kala duwan. Tababbarka Heerka A CDL wuxuu caadi ahaan qaataa waqti ka badan Fasalka B ama C. Si taas loo gaaro, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo ma aha oo kaliya booskaaga shaqo ee hadda jira laakiin sidoo kale sida aad doonayso inaad mustaqbalkaaga u hormariso xirfaddaada. Helitaanka liisanka aad hadda u baahan tahay ayaa kaa badbaadin doona inaad dib u samayso tababbarka wadista baabuurka haddii aad doonayso meel kale oo baabuur wadista baabuurka ka dib.
Sababtoo ah tirada badan ee hawlgabka Baby Boomer, baahida loo qabo darawalada baabuurta xamuulka ee America ayaa sare u kacday waxayna sii socon doontaa inay kor u kacdo tobanka sano ee soo socota. Sidaas darteed, kaxaynta baabuurtu waa doorasho xirfadeed oo badbaado leh, waxaana loo baahan doonaa wadayaasha baabuurta.
Si aad u hesho liisanka CDL, waxaad u baahan tahay inaad qaadato tababar socon doona wax aan ka badnayn 3 toddobaad, taas oo ku xidhan liisanka. Barnaamijka Tababbarka CDL wuxuu kugu xiraa xirfado aad u adeegsan karto hagaajinta noloshaada - xirfad ahaan iyo shaqsi ahaanba.
Sida Loo Bixiyo Si Aad U Hesho CDL -gaaga
Waxaa jira tiro badan oo shirkado ah oo diyaar u ah inay ku siiyaan inta aad marayso habka helitaanka CDL. Tusaale ahaan, Gaadiidka Roehl diyaar u yahay inuu ku siiyo intaad tababbarto si aad u hesho CDL -gaaga iyo markaad waddada ka sii waddo Tababaraha Darawalnimada ee Shahaadaysan.
Sida Roehl Transport, waxaa jira shirkado kale oo xamuul oo diyaar u ah inay xitaa ku siiyaan $ 500 ama ka badan toddobaadkii intaad wax baranayso, taas oo macnaheedu yahay inaad samayn karto $ 3500 ama ka badan intaadan xitaa bilaabin inaad u shaqayso darawal baabuur. Qof ku jira qorshe miisaaniyad hoose, waxaan dareemayaa inay tani tahay fursad weyn oo lacag lagu kasban karo.
Shirkadaha bixiya barnaamijyada tababarka CDL ee lacagta leh ayaa laga heli karaa inta badan kuwa sida weyn u sidda.
Shirkado badan oo waaweyn oo baabuur xamuul ah oo Maraykan ah ayaa ka shaqeeya iskuullada tababbarka wadayaasha baabuurta. Si aad u bilowdo, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto sidaha mid ka mid ah shirkadaha ku jira liiska shirkadaha bixiya tababbarka CDL ee hoos ku qoran adiga oo doonaya inaad barato wadista baabuurka. Inta badan shirkadaha xamuulka qaada ayaa isku raaci doona inay bixiyaan kharashka tababarkaaga, haddii aad u shaqayso iyaga ka dib.
Shirkadda xamuulka qaada, waxaad ku baran doontaa sida loo kaxeeyo riig weyn, hel CDL -ga iyo sidoo kale kasbashada shaqo wadista.
Waa Maxay Shirkadaha Bixiya Tababarka CDL ee Lacag -La'aanta ah?
Halkaan waxaa ah liiska shirkadaha xamuulka qaada ee bixiya tababarka CDL ee lacagta leh iyo shaqo, markay dhammaystaan ​​barnaamijkooda.
CRST Truck School
CR England CDL School
Prime Trucking School iyo Prime Trucking Company
KLLM Truck School iyo Company
Schneider School Trucking School iyo Company
Gaadiidka Degdegga ah
Dugsiga Wadista Stevens (Gaadiidka Stevens)
Tababbarka Saadka Wilson
Waa maxay Shuruudaha Tababarka CDL ee Lacag -bixinta Shirkadda?
Haddii aad rabto inaad iska diiwaangeliso barnaamijka tababarka CDL ee lacag -bixinta ah, waa inaad buuxisaa shuruudaha qaarkood si aad ugu qalanto. Inta badan shirkadaha kaxeeya baabuurta xamuulka waxay qiimo weyn siiyaan badbaadada iyo dadaalka. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah shuruudaha ay tahay inaad buuxiso markaad codsaneyso.
Waa inaad jirtaa ugu yaraan 21 sano. Adeegyada qaarkood waxay kaa rabaan inaad ahaato ugu yaraan 22 ama 23 sano,
Waa inaad haysataa liisanka darawalnimada Maraykanka oo ansax ah (badiyaa 365kii maalmood ee la soo dhaafay),
Waa inaad tahay muwaadin Mareykan ah ama sharci ahaan laguu oggol yahay inaad ka shaqeyso Mareykanka.
Waa inaadan haysan xukun DUI/DWI shantii sano ee la soo dhaafay.
Diiwaankaaga wadista kuma jiri karo wax xadgudubyo guuritaan ah saddexdii sano ee la soo dhaafay,
Waa inaad ku gudubtaa tijaabada caafimaadka dhibcaha,
Baaritaanka daroogada DOT.
Waa inaad samaysaa baadhitaan dembi oo nadiif ah.
Waa inaad leedahay taariikh shaqo oo la xaqiijin karo saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Waa inaad ku dadaashaa inaad u shaqayso shirkadda xamuulka qaada ugu yaraan hal sano; shirkadaha qaarkood waxay u baahan yihiin ballanqaad laba sano ah.
Haddii aad buuxiso tobankaan shuruudood, waxaad ku kalsoonaan kartaa in laguu aqbali doono barnaamijka tababarka CDL ee lacag la'aanta ah ee shirkadda oo aad dibadda ugu baxdo sida ugu dhakhsaha badan. Kadib markaad akhrido dhammaan macluumaadkaan waxaad samayn kartaa go'aan la xaqiijiyay haddii aad rabto inaad bilowdo xirfad darawal baabuur.
Kasbashada inta lagu jiro tababarka CDL waxay siisaa tababaraha fursad aad u badan si uu u helo aqoon wax ku ool ah isla marka uu kasbado iyo laga yaabee shaqo ka helidda shirkadda xamuulka qaada dhammaadka tababarka. Nasiib wanaagsan!
truckdrivingschoolsinfo.com - Tababbarka CDL ee Lacag -bixinta: Sida Loo Helo $ 3,500 Intaad Wax baranayso
smart-trucking.com - WAX WALBA WAXAAD RABTAA INAAD KA OGAATO TABABARKA CDL EE LA BIXIYO
cdl.com - Sideen ku Helaa CDL?
Qasaaraha Baabuurta Is-kaxaynta | Tusaalooyin Nololeed oo dhab ah
12 Baabuur ee ugu Fiican oo leh Astaamaha Wadista Gawaarida ee 2021
Sida Loo Helo Cunto Bilaash Ah Lacag La'aan 2021